Khayraatka lumay ee Soomaalida! – Kaasho Maanka
KHayraatka ugu qaalisan ee uu dal yeesho waa dadkiisa (Human Resource). Dal walba inta uu kaa dad badanyahay ayuu kaa cudud iyo tamar-gacan badanyahay. Shiinaha oo ah dalka ugu dadka badan dunida, waxa ay ku qaadatay 40 sano oo dib u qaabayn dhaqaale ah in uu ku noqdo cududda labaad dunida ee xagga dhaqaalaha. In badani arintan waxaa ka caawiyay tamarta ballaaran ee uu haystay oo ah dadkiisa kuwaas oo qeyb lixaad leh ka qaatay dhaqaajinta mashiinka dhaqaalaha ee dalkaasi iyo dardargelinta xawaaraha lacagta.
Hindiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan dunida ayaa asaga oo ka faa’iidaysana cududda dadkiisa waxa uu dunida ka iibiyaa xirfadda dadkiisa, waana dalka ugu horeeya dunida marka ay noqoto xirfadlayaasha ka shaqeeya dal aysan u dhalan. Sidoo kale, Hindiya waxa ay soo jiidatay warshadaha ugu waaweyn dunida sida Microsoft, IBM (International Business Machines Corporation), Nestlé, Sony Corporation, Hewlett Packard (HP), Apple Inc, iyo qaar kaloo badan. Hindiya iyo dal walba oo dadkiisu badanyahay waxa ay ku naaloonayaan suuq aad u ballaaran suuranagelin kara dhaqaale baaxad sare leh oo uu dalkaasi yeesho in ay kusoo hirtaan shirkadaha waaweyn ee caalamka ka jira.
Maraykanka oo laftigiisu ah dalka seddexaad ee ugu dadka badan dunida, kuna baraarugsanaa ahmiyadda dadku u leeyihiin dalkaasi, ayaa ku dadaala in uusan ka harin wadamada ka horreeya isaga xagga dadka oo kala ah Shiinaha iyo Hindiya. Ayaga oo ka duulaya cududda ay doonayaan in ay ku hayso ama kasii dhaqaajiso dhaqaalaha Maraykanka halka uu joogo, ayuu Maraykanku ku dadaalaa in uu ku koriyo dadkiisa hab aanan dabiici ahayn oo ah in uu si miisaaman uga soo qaato dadyowga kale ee dunida.
Marka aynu u nimaano Afrika seddexda dal ee ugu dadka badan waa Nayjeeriya, Itoobiya iyo Masar e, ayaa dhamaantood ku naaloonaya in ay cudud dhaqaale oo koraysa leeyihiin sidoo kalena ka horreeyaan xattaa wadamada ka aqoonta badan balse ka bulshada yar ee Qaaradda. Nayjeeriya waxaa lagu tilmaamaa camaaliqada Afrika, waxa ayna ka horeeyaan xagga dhaqaalaha wadamada sida Koonfur Afrika oo kale.
Soomaalida oo lagu qiyaaso dhamaanteed 15 milyan ayaa haddana isi sii kala qobqobaysa oo u kala hoobanaysa dalal yar yar. Intaas oo kali ah kuma eka e, waxaa usii dheer in aynu iska dilno maskaxda wax baratay oo aan isi sii afjarno. Dadkii u suurtageliyay Maraykanka qunbuladdii atoomikada ahayd, dhammaantood waxa ay ahaayeen dad ajaanib ah oo dhalasho laga siiyay Maraykanka, ujeedkana waxa uu ahaa in ay maskaxdooda ku kabaan dalka, halka Soomaaliduna ay dilaan midkoodii waxbartay iskaba daa in ay ka faa’iidaystaan maskaxdiisa e. Kanada ayaa sanadkii 2017-da guddoonsiiyay jinsiyad sharafeed Kaneediyaan ah gabadhii yarayd ee u ololayn jirtay waxbarashada hablaha ee u dhalatay dalka Paakistaan waa Malala Yousafzai e, ujeedkana waa in magaceeda iyo maskaxdeeda laga faa’iidaysto.